Tag: kuseta kuseta | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 9, 2018 Chitatu, October 28, 2020 Douglas Karr
Sekuratidzwa kwevhidhiyo iyi kubva kuSalesRep inoratidza, chikamu chikuru chenguva yekubuda yekutengesa chinoshandiswa kubatana kana kuronga kusangana nemutengi. SalesRep inoshandisa kufona otomatiki ine yakazvimiririra, yechisikigo mitauro yekugadzirisa chikuva kuti utore iko kuedza kubva kumashure kwetimu rako rekutengesa, zvichivagonesa kuisa pfungwa dzavo dzese pakutengesa - kwete kubatana. Ipuratifomu inobvumira vatengi kuvaka matanho akarongwa vachishandisa email, izwi, uye mameseji eSMS.
vCita: Kusarudzwa, Kubhadhara, uye Kubata Portal yeMabhizinesi Madiki Sites
China, Gumiguru 9, 2014 China, Gumiguru 9, 2014 Douglas Karr
LiveSite ne vCita inotora zvese kuoma kwekugadzwa kwekugadzwa, kubhadhara pamhepo, manejimendi manejimendi uye kunyangwe kugovana magwaro uye kuiisa mune yakanaka slide pane webhusaiti yako. Akakosha Zvimiro zveLiveSite ne vCita Kubata Management - Tora ruzivo rwevatengi uye gadzirisa nhaurirano yavo nechikwata chako. Iyo webhu interface inokutendera iwe kubata vanobata, kuwana nzwisiso, kuteedzera kwevatengi kudyidzana, kupindura uye kuteedzera-uchishandisa chero chishandiso. Unogona kunyange kugadzirisa kutaurirana kwevatengi, zviyeuchidzo uye zviyeuchidzo.